घरमा यिन यांग थियरी र फेंग शुई सजाउनुहोस्
घरमा यिन यांग थ्योरी र फेंग शुई
यिन-या theory सिद्धान्त सबै पुरानो चिनियाँ विचारधाराको मुख्य सिद्धान्त हो। पारम्परिक चिनियाँ चिकित्सा (TCM), प्राचीन मार्शल आर्ट, फेen शुई, आई चिंग, र ताओइज्मको सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड विज्ञान यिन र या Yको गतिशीलतामा आधारित छ।
यस सिद्धान्तका अनुसार, हाम्रो ब्रह्माण्डमा सबै कुरा दुई विपक्षी तर गहिरो आपसमा जोडिएको बलहरू मिलेर बनेको छ: यिन (महिला) र याang (पुरुष)। यी दुई फेen शुई सेनाहरू बीचको अन्तरक्रियाले हाम्रो वरिपरि जीवनको सार सिर्जना गर्दछ। एक अर्काबिना अस्तित्व रहन सक्दैन, उनीहरूको स्पष्ट विपक्षमा तिनीहरू गहिरो सहयोग गर्दछन् र एक अर्काको पालनपोषण गर्छन्।
1 सामंजस्यपूर्ण उर्जा
3 सन्तुलन सिर्जना गर्नुहोस्
4 विशिष्ट क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुहोस्
यिन र याang सेनाको सामंजस्यपूर्ण इन्टरप्लेको उत्कृष्ट प्रतिनिधित्व भनेको ताई ची प्रतीक हो। फेen शुई र colorsहरूमा व्यक्त गरिएको, यिन (महिला उर्जा) काली र याang (पुरुष ऊर्जा) सेतो छ। ऊर्जाको बारेमा, यिन नरम, ढिलो, आराम, विसरित, आर्द्र, निष्क्रिय र मौन छ। महिला ऊर्जा को ताल र सार बारे सोच्नुहोस्: पानीको कोमलता, चन्द्रमाको रहस्य, धनी पृथ्वीको कालोपन र रातको गहिरो मौनता।
याangको बल ऊर्जाको गुणले व्यक्त गरेको हुन्छ जुन यिनको विपरित र विपरीत हो। सूर्यको ज्वलन्त खुलापन, दौड कारहरूको आक्रामक गति, ठोस सतह कल्पना गर्नुहोस् पहाडमा भएको चट्टान र लेजर बीमको केन्द्रित उर्जा जस्तो।
यांग मध्य दिनको सूर्यको ज्वलन्त सार हो र यिन रातको स्थिरता र रहस्य हो। किनभने तपाईंको घरलाई तपाईंको भलाईको लागि सन्तुलित फ्या sh शुई ऊर्जा चाहिन्छ, यो हो व्यावहारिक र साधारण स्तरमा यिन-यां theory सिद्धान्तको अनुप्रयोग बुझ्नु महत्त्वपूर्ण छ।
यिन (निष्क्रिय ऊर्जा) फेंग शुई रिलक्सन उर्जा हो जुन तपाईंलाई तपाईंको बेडरूममा र तपाईंको फेen शुई स्पा स्नानगृहमा चाहिन्छ। यिन ऊर्जा शान्त र in्गमा छ कि तपाईं वरिपरि, नरम संगीतमा, पानीको फोहराको सुखदायक आवाजमा वा पानीको सुखदायक छविहरूमा।
याang (सक्रिय ऊर्जा) फen्ग शुई उर्जा हो जुन दृढ, जीवन्त ध्वनी र रंग, उज्यालो बत्ती, माथिल्लो गतिशील उर्जा, अग्लो बोटहरू, इत्यादिमा अभिव्यक्त हुन्छ। तपाईं आफ्नो घर अफिस, तपाईंको भान्साकोठामा राम्रो यांग ऊर्जा उपस्थिति पाउन चाहनुहुन्छ। तपाईंको अगाडिको ढोका, साथ साथै साथीहरूसँग राम्रो डिनर ...
सन्तुलन सिर्जना गर्नुहोस्
यिन-यांग ऊर्जाहरू एक्लोसेसनमा अवस्थित हुन सक्दैन; तिनीहरू एक अर्काको परिभाषा गर्दछन्, किनकि एक अर्काको अस्तित्वको लागि सर्त हो। एक राम्रो फे sh शुई घर सक्रिय र निष्क्रिय ऊर्जा को ताल को एक सामंजस्यपूर्ण अभिव्यक्ति हुनु पर्छ।
पश्चिमी संस्कृतिमा, हामी फेen शुई उर्जाको असंतुलनको अनुभव गर्छौं। हामी गतिविधिको एक स्थिर धारामा बाँचिरहेका छौं र हामी धेरै व्यस्त छौं, याang क्वालिटी फे sh शुई उर्जासँग र हामी अक्सर कमजोर छौं, वा यिन ऊर्जाको अभाव पनि (आरामदायी र पोषणदायी)।
एउटा घर बनाउने जुन फेen शुई यिन-यांगको सन्तुलन प्रतिबिम्बित गर्दछ धेरै महत्त्वपूर्ण छ, त्यसैले यो तपाईंको घरलाई हेर्दा र तपाईंलाई यी ऊर्जाहरूको एक कडा असंतुलन छ जहाँ केही समय खर्च गर्न लायक छ। के तपाईको कोठामा आराम गर्ने यिन उर्जाको अभाव छ? के तपाईको भान्छामा धेरै यिन छ र य Y पर्याप्त छैन? त्यहाँ सँधै उर्जाको गुणस्तर हुन्छ जुन ठाउँको प्रयोगमा निर्भर हुन्छ। तर तपाईसँग यिन र याang फेंग शुई ऊर्जा हुनु पर्छ तपाईको घरमा राम्रो फen्ग शुई।
विशिष्ट क्षेत्रमा प्रयोग गर्नुहोस्
तपाईंको घरमा यिन र यांangको फेen शुई सेनाहरू बीच सामञ्जस्यपूर्ण सन्तुलन राख्नुले तपाईंलाई स्वस्थ र सन्तोषजनक जीवन जिउन आवश्यक ऊर्जाको गुणस्तर सिर्जना गर्दछ। यसको मतलब केहि क्षेत्रहरूमा घरको भित्र उनीहरूको कार्यमा निर्भर बढी यिन वा याang ऊर्जा हुनुपर्छ।
तपाईंको सुत्ने कोठामा तपाईंलाई आराम गर्न यिन ऊर्जा चाहिन्छ, त्यसैले टिभी, व्यायाम उपकरण, वा कुनै कार्यालयका आपूर्तिहरू जस्ता कोठामा भएका सबै प्रभावशाली यांang फen्ग शुई तत्त्वहरू छोड्नु महत्त्वपूर्ण छ। जबकि यिन ऊर्जा तपाईंको कोठामा प्रमुख ऊर्जा हुनुपर्दछ (सोच्नुहोस् आराम, कामुकता, निद्रा)। तपाईंलाई याangको हल्का उपस्थिति पनि आवश्यक छ (रातो मोमबत्तीहरू, रोमाञ्चकारी इमेजरी, गहिरो र balance्गलाई सन्तुलित गर्न हल्का एक्सेन्ट रंग, आदि) सोच्नुहोस्। समान सिद्धान्त तपाईंको बाथरूममा लागू हुन्छ।
तपाईको परिवार कोठा, बैठक कोठा, घरको कार्यालय, र भान्छा निश्चित रूपमा फेen शुई रिक्त स्थान हो जुन यांग उर्जाको एक मजबूत उपस्थितिबाट फाइदा लिन सक्छ। सक्रिय कम्पनरी उर्जा (खुशी पारिवारिक फोटो, उज्यालो किताबहरू, रमाइलो खेलहरू, आदि) सिर्जना गर्नको लागि भाइब्रेन्ट र colors्गहरू, उत्साहित संगीत, र विभिन्न प्रकारको फen्ग सुई फर्निचर वस्तुहरू छान्नुहोस्। यिन, वा आरामदायी तत्व, यहाँ प्रबल तत्व होईन, तपाईंलाई अझै पनि सन्तुलनको लागि यो आवश्यक पर्दछ।। यसले गहिरो र colors्ग, आराम र आरामदायक सिटहरू, साथै सुखदायक यिन ऊर्जाको साथ केही छविहरू प्रस्तुत गर्दछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: मुख्य पृष्ठ » सजावट » घरमा यिन यांग थ्योरी र फेंग शुई
काउन्टरटप छनौट गर्न र यसलाई सहि बनाउनको लागि सुझावहरू
बाथरूमको लागि तपाईंको तौलिया रैक छनौट गर्नुहोस्